Hillside Cabin #4 Annapolis, MO Black River - I-Airbnb
Annapolis, Missouri, i-United States
I-indlu eyakhiwe ngamapulangwe ephelele ibungazwe ngu-Justin
I-Brand NEW Cabin imizuzu nje ukusuka eBlack River kufakwe i-WIFI neSatellite TV. Le khabhini ilungele imibhangqwana, abantu abazihambela bodwa, abahambi bebhizinisi, noma imindeni enezingane ezifuna indawo yokuphumula nokubaleka. Eduze kwamapaki amaningi kahulumeni, imisila yokuqwala izintaba, imifula, nokunye.
Lo mndeni unobungani bekhaya-kude-nasekhaya ulala eziyi-10 futhi ulungele ukubaleka endaweni ecashile. Izindlu zokugezela zigcwele amathawula, izindwangu zokugeza, okomisa izinwele, ne-ayina. Ikhishi lilayishwe yonke into oyidingayo okuhlanganisa isitofu, isiqandisi, imicrowave, itoaster, ibhodwe lekhofi, amabhodwe namapani, izitsha, izinto zesiliva, izitsha, njll. Igumbi lokuphumula linesofa nesihlalo sothando esinama-recliner ohlangothini ngalunye, kanye ne 55" i-smart screen ye-smart TV enokufinyelela kwamahhala kwesathelayithi okufakiwe. I-wifi yamahhala nayo ifakiwe ukuze kube lula kuwe.
Nethezeka futhi uthathe imvelo, noma uhlangane nabangane noma umndeni endaweni emboziwe egcwele ifenisha yevulandi kanye netafula lokudlela. Indawo yokucima umlilo kanye ne-BBQ grill nakho kuyatholakala ukuze ujabulele.
Le ndlu isendaweni eseceleni ngaphandle kwedolobhana lase-Annapolis. Ngenkathi kunokuthula futhi kuphumule, i-Dollar General, isitolo esithenga kalula/igalaji likaphethiloli, namanye amabhizinisi kuqhele ngomzuzu ongu-1 ngokushayela. Igceke elikhulu lilungele ukudlala imidlalo, ukuphumula eduze kwendawo yokucima umlilo, noma ukuba nepikiniki nomndeni. Ziningi izinto ozenzayo ngenkathi ujabulela ukuhlala kwakho, okuhlanganisa ukuntanta i-Black River ne-Jeff's Canoe Rentals, noma ujabulele elinye lamapaki endawo noma izindawo ezikhangayo zezwe ezinikezwa yile ndawo.
Hlola ezinye izinketho ezise- Annapolis namaphethelo